Nahoana No Nandray Anjara Tamin’ny Fifidianamben’ny Fanjakana Mitambatra Ilay Olompirenena Britanika Teraka Etiopiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 7:25 GMT
Andy Tsege, mpitolona ho an'ny demokrasia, nalaina an-keriny ary mety hiatrika famonoana ho faty any Etiopia. Pikasary avy amin'ny lahatsary YouTube nampiakarina tao amin'ny fantsona YouTube-n'ny Reprieve.
Nilatsaka ho mpifanandrina amin'i Theresa May toy ny mpifaninana tsy miankina anatin'ny fifidianana antenimiera ao amin'ny Fanjakana Mitambatra i Yemi Hailemariam, vehivavy Britanika taranakà Etiopiana, mba hisarihana ny sain'ny vahoaka amin'ny mety hanjo ny vadiny, Andargachew Tsege.
Olompirenena Britanika teraka Etiopiana i Andargachew ‘Andy’ Tsege, izay nipetraka tany Londra niaraka tamin'ny vadiny sy ireo zanany telo, efa efapolo taona mahery izay. Nalainà manampahefana Etiopiana misahana ny fiarovana an-keriny izy raha hiova fiaramanidina.
Ny 23 Jona 2014, tonga tao Yemen tao amin'ny seranampiaramanidin'i Sana ny fiaramanidina nisy an'i Andy, izay tokony hoe nifindrany tao amin'ny sidina makany Asmara, renivohitr'i Eritrea. Nohazonin'ireo manampahefana Yemenita anefa i Andy ary naverin'izy ireo tany Etiopia, izay iatrehany fanamelohana ho faty noho ny fiampangana azy ho niray tsikombakomba tamin'ny fanonganana ny fitondrana tamin'ny 2009.
Andy miaraka amin'ny ankohonany. Sary an'ny Reprieve
Nirotsaka ho mpifaninana tsy miankina tao amin'ny faripiadidian'i May i Yemi. Vitsy ihany ny vato azony saingy tena nandaitra ny fampielezankeviny satria afaka nametraka mivantana ny fitarainany tany amin'ny Praiminisitra izy.
Reharehako i Yemi Hailemariam, vadin'i Andy Tsege izay nandia ny làlana rehetra mankany Maidenhead mba hihaonana amin'i Theresa May & hangatahana ny famotsorana an'i Andargachew.
Tamin'ny alin'ny fifidianana, nanao ambonin'akanjo misy soratra hoe ‘Free Andy Tsege’ (Avotsory i Andy Tsege) i Yemi, ary nifandray tanàna tamin'i May.
Ny fihaonan'ireo mpifaninana. Roa samy manao mena; ny iray falifaly, ny iray kosa tsia. Mety ho faly kokoa izy raha toa ka mihezaka mamoaka an'i Andy Tsege i Theresa May.
Tao amin'ny Facebook, nanoratra izao i Abebe Gelaw, tale mpanatanterak'ilay fantsona fahitalavitra ESAT mandeha amin'ny zanabolana, tantanan'ny zanaka ampielezana:
I Yemi no mpandresy! Nijery mivantana ny valim-pifidianana Britakina tamin'ny BBC aho. Na teo aza ireo hirifiry nampianjadiany tamin'ny tenany, nahatazona ny toerany ao Maidenhead ihany i Theresa May, Praiminisitra Britanika, seza izay notazoniny hatramin'ny taona 1997. Fa tsy izany no zavatra tena nahaliana nojereko teo amin'ny vata fahitalavitra.
Maro ireo mpifaninana nameno ny vata fahitalavitra niaraka tamin'ny Praiminisitra. Saingy amiko, ilay vehivavy mavitrika sy feno fahaiza-mamorona niakanjo t-shirt misy hafatra hoe: “Avotsory i Andy Tsege”, no nijoro ho mpandresy. Nanapa-kevitra ny hifanandrina tamin'i Theresa May i Yemi Hailemariam, tsy noho ny faniriana hanala azy amin'ny toerany akory. Fa tiany hosarihina kosa ny fijerin'ny olona amin'ny fihatsarambelatsihy ataon'ny Praiminisitra Britanika sy ny governemantany noho ny tsy firaharahian'izy ireo izay mety hanjo an'i Andargachew Tsege, izay nahazo ny zom-pirenena Britanika ary rain'ireo zanany telo.
Tsy vitan'ny hoe nahazo vato fotsiny i Yemi, fa nahazo sehatra nasionaly ihany koa mba hampahafantarany ny fijalian'ny mpiady ho an'ny fahafahana izay nalaina an-keriny, naverina tany Etiopia ary mbola mijaly any am-ponja.
Nanao hetsipanentanana i Yemi, niaraka tamin'ireo zanany telo, mba hamoriana azy ireo indray miaraka amin'i Andy nanomboka tamin'ny fahavaratry ny taona 2014.
Nampangain'ny governemanta ho nampiredareda ireo hetsipanoherana manohitra ny fitondrana tany amin'ny tanindrazany i Andy, izay ao anatin'ny fanoherana isan-karazan'ny zanaka ampielezana ny fitondrana Etiopiana. Tao anatin'ny vondrona mpanohitra Ginbot 7 izy.
Nanomboka tamin'ny Oktobra 2016, ao anaty toe-draharaha mafana ilaina vahaolana vonjimaika i Etiopia satria mitombo hatrany ny fihetseham-po manohitra ny fanjakana. Tanatin'ny heri-pamoretana nanaraka izany, maro tamin'ireo mpitarika ny mpanohitra no nitsoaka ny firenena na naiditra am-ponja.